လမ်းမပေါ်မှ ရမ်းကားမှုများကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ - Hello Sayarwon
လမ်းမပေါ်မှ ရမ်းကားမှုများကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Kyaw Thura Htun မှ ရေးသားသည်။ 12/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Road rage ဆိုတာကတော့လမ်းပေါ်မှာယာဉ်မောင်းနေရင်းတခြားယာဉ်မောင်းသူတစ်ဦးရဲ့အပြုအမူကြောင့်ထိန်းချုပ်မရဘဲဒေါသထွက်ကာဆိုးရွားတဲ့အပြုအမူတွေအထိလုပ်မိတာမျိုးပါ။ဥပမာတွေကတော့တခြားယာဉ်မောင်းရဲ့ယာဉ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ယာဉ်နဲ့တိုက်ပစ်ခြင်း၊သူများယာဉ်ကိုလမ်းဘေးရောက်အောင်တွန်းပို့ခြင်း၊သင့်ရဲ့ခရီးသည်တွေကိုတခြားယာဉ်မောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့တွန်းအားပေးခြင်း၊ယာဉ်ကိုပြန်ကွေ့ပြီးရပ်ကာတခြားယာဉ်မောင်းကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်စေ၊လက်နက်သုံးပြီးဖြစ်စေတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
Road rage ဆိုတာဘာလဲ ?
လူတိုင်းက road rage ဆိုတာကြုံနိုင်ပါတယ်။ ကျားမအသက်အရွယ်မရွေးဒေါသကြီးသူရောမကြီးသူရောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့roade rage ကိုသူတို့ယာဉ်မောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းကြုံနိုင်ပါတယ်။ တချို့သူတွေအတွက်ဒါကပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်နိုင်ပါတယ်။Road rage ကတချို့အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်အရမ်းဘေးရန်ကြီးပါတယ်။ဥပမာ – ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စေခြင်း၊လက်နက်တွေစွဲကိုင်ပြီးခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အိမ်ကိုဘာမှမဖြစ်ဘဲမောင်းနိုင်ခဲ့ရင်တောင် road rage ကသင့်ကိုဒေါသထွက်စေတဲ့အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတဲ့အပြင်နှလုံးခုန်မြန်စေပြီး သွေးတိုးစေပါတယ်။ တကယ်လို့သင်နေ့တိုင်း road rage ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သင့်အနေနဲ့နာတာရှည်စိတ်ဖိစည်းခြင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီးဒါကသင့်ရဲ့ကိုယ်ခံစနစ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကမောက်ကမဖြစ်စေပြီးနှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ရာသီသွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြသနာဖြစ်ခြင်း၊ခူနာခြင်း၊ တောင့်တင်းခြက်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖွ့ဖြိုးမှုရပ်တန့်ခြင်းတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Road rage ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အချက်များ
တကယ်လို့သင်ကRaod rage ဖြစ်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုကြည့်ပါ။
သင့်မှာအိပ်ရေးဝဝရှိဖို့လိုပါတယ်။ သင်ကပင်ပန်းနေရင် road rage ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗိုက်ဆာတာကလည်းဒေါသထွက်စေတဲ့အတွက်သင့်ကားထဲမှာမုန့်တချို့ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေတခြားယာဉ်မောင်းကသင်နဲ့သင့်ခရီးသည်တွေကို ဘေးဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတစ်ခုခုလုပ်မိခဲ့ရင်သင်ဟာဒေါသထွက်လာပါမယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဒေါသထွက်ပြီးကတုန်ကရီဖြစ်တာကပုံမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ကားကိုလမ်းဘေးခဏထိုးရပ်ပြီးစိတ်ကိုလျှော့ချကာသင်တို့ကိုမှားခဲ့တဲ့ယာဉ်မောင်းအကြောင်းရဲတွေဆီသတင်းပို့သင့်ပါတယ်။
သင့်စိတ်ကို Road rage အကြောင်းမတွေးမိအောင်တခြားဆီပြောင်းပါ။
အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေ၊ဟာသတွေအကြောင်းပြောင်းတွေးပါ။ဥပမာ – သီချင်းဆိုခြင်းနဲ့သင့်ရဲ့မကောင်းမြင်တဲ့အတွေးတွေကို ပျောက်စေနိုင်တာတစ်ခုခုတွေးပါ။
ယာဉ်အသွားအလာတွေယာဉ်မောင်းတွေကအဖွဲအစည်းကြီးတစ်ခုပါ။ လမ်းပေါ်သွားလာနေတဲ့အချိန်ယာဉ်မောင်းအားလုံးကအချင်းချင်း ဘေးကင်းစွာပန်းတိုင်ရောက်အော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရတဲ့အဖွဲ့သားတွေပါ။ တကယ်လို့တစ်စံတစ်ယောက်ကသင်သွားနေတဲ့လမ်းကိုဖြတ်တက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဒေါသထွက်မယ့်အစားတစ်ချိန်ချိန်တော့တစ်ယောက်ယောက်ကတက်လာမှာဘဲလေဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေးပေးပါ။
သင်သိထားရမှာယာဉ်မောင်းခြင်းဆိုတာအနိုင်ရမယ့်ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်မှာဆုံးရှုံးစရာတွေရှိတဲ့အတွက်တကယ်လို့သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကားယာဉ်မောင်းလက်ကိုင်ဆီ ပေးထိန်းလိုက်ရင်ယာဉ်တိမ်းမှောက်နိုင်ပါတယ်။Road rage ကထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့်သင့်ဘဝရဲ့တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပြန်တွေးပြီးမိမိကိုယ်ကိုဖျောင်းဖျခြင်းကခြားနားချက်အကြီးကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။
The Root Cause of Road Rage. http://www.webmd.com/women/features/root-cause- of-road- rage#2. Accessed
December 31 st , 2016.
Road Rage: How to Deal with It. http://www.dmv.org/how-to- guides/road-rage.php. Accessed December 31 st ,
2016.The Root Cause of Road Rage. http://www.webmd.com/women/features/root-cause- of-road- rage#2. Accessed
ကော်လာဂျင်က ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိလား......
ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်တတ်တာ ဘာကြောင့်လဲ